यस्ता महिलालाई हुन्छ पाठेघर क्यान्सरको जोखिम, यी संकेत देखा परे वेवास्ता नगर्नुहोस् – Kavrepati
Home / स्वास्थ्य / यस्ता महिलालाई हुन्छ पाठेघर क्यान्सरको जोखिम, यी संकेत देखा परे वेवास्ता नगर्नुहोस्
admin July 29, 2021	स्वास्थ्य Leaveacomment 143 Views
आउनुहोस् जानौँ कुन-कुन हुन् पाठेघरका शुरुवाती लक्षण ? १) महिनावारी असामान्य हुनु । साथसाथै कम वा धेरै रक्तश्राव हुनु । २) तल्लो पेट तथा ढाडको तल्लो भागमा पीडा महशुस हुन पनि पाठेघर क्यान्सरको शुरुवाती लक्षण हो।
३) महिलालाई छिन्छिन्मा पिसाब लाग्नु वा नियन्त्रण गर्न मुस्किल हुनु पनि गर्भाशय क्यान्सरको संकेत हुनसक्छ। ४) सम्भोगका समयमा असामान्य पीडा हुनुलाई पनि सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन्। यो पनि पाठेघर क्यान्सरको सुरुवाती लक्षण हुनसक्छ।
५) पेट फुलिएको महशुस हुनु वा पेट दुख्नु पनि गर्भाशय क्यान्सरको सुरुवाती लक्षण हुनसक्छ। ६) यदी पटक पटक कब्जितको समस्या देखियो भने पनि डाक्टरको सल्लाह लिन जरुरी छ। पटक पटक कब्जितको समस्या हुनु पनि पाठेघरको क्यान्सरको लक्षण हुनसक्छ।
के कारण हुन्छ पाठेघरको क्यान्सर ? १) विशेषज्ञ डाक्टरका अनुसार यस बिरामीको एकदम सटिक कारण बताउन भने निकै गाह्रो छ। यसको मुख्य कारण त महिनावारीका समयमा सरसफाइदा ध्यान नदिनु हो।
२) महिनावारीका समयमा कयौँ महिलाले सेनेटरी प्याडलाई लामो समयसम्म प्रयोग गर्ने गर्छन्। जबकी ६ घण्टा वा ६ घण्टा पहिले नै प्याड परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।
क्यान्सरबाट बच्न के गर्ने ? सामान्य लक्षणलाई वेवास्ता नगर्नुहोस्। बेला बेलामा डाक्टरको सल्लाह लिन आवश्यक हुन्छ। आजभोलि यसबाट बच्न भ्याक्सिन पनि उपलब्ध छ।
डाक्टरको सल्लाहमा भ्याक्सिनको प्रयोग गर्नुहोस्। शरीरमा कुनै परीवर्तन देखिए भने तुरुन्त चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्। आफ्नो जीवनशैलीमा सुधार गर्नुहोस् र अस्वस्थकर खानेकुरा खानबाट बच्नुहोस्।हरेक दिन योगा तथा एक्सरसाइज गर्नुहोस्।
Previous फेसबुकमा पर्‍यो लभ, जब भेट्न पुगे युवा युवती, देख्ने बित्तिकै किन भयो यति ठूलो ववाल?
Next यो झार चिन्नुभएको छ ? जसले दिन थाल्यो मासिक ५० हजार कमाई ।